Maxaa ka danbeeya iscasilaadda Pope Benedict - Geofumadas
Maxaa ka danbeeya iscasilaadda Pope Benedict
Febraayo, 2013 Leisure / waxyi
Maanta, dunidii ka soo horjeeday ayaa dib uga soo baxday warar sheegaya in kaliya ay ina tusinayso ka qaybgalka Kaniisadda Katooliga ee caalamiga ah.
Maanta waxa ay noqon lahaayeen caadi Monday 11 February la ephemeris in uusan mar hore ka baxsan magaalooyinka, kuwaas oo weli gargaare waa Virgin ee Lourdes, kulaylka of show dheer oo ka bilaabma maanta, iyadoo cunnada maxalliga ah ee champas agagaarka square ah, rodeo on Thursday kubada cagta horyaalka ee habeenkii iyo martida ka yimid tuulooyin kale inuu ka tago qaar ka mid ah lacagaha oo dhoolo adag gabdhaha park jeedday.
Laakiin si ay u noqoto tusaale ahaan, qaabka Venezuela, Twitter, 6 ee 10 hashtags ayaa soo maraya dhacdadan:
Sidaas darteed, warka ayaa saxaafada u soo gudbiyay wakhti wakhti waabarigii qaaradda maraykanka ah; laga bilaabo ogeysiisyada ugu mudan ee lagu soo bandhigo ficillada ba'an, waxaa la filayaa tan iyo waayadii la soo dhaafay Internetka waxay noqdeen caan. Filimadu waxay u eg yihiin Malaa'igta iyo Jinniyada oo dareensan in aan waxba ka dhicin noloshaan iyada oo aan wax qarsan.
Tani, iyo madadaalada in ay soo saartaa wiilkayga furitaanka fasal dhacdo grand ayaa igu khasabtay in aan maal erayada 755 on topic ah in maalmaha soo socda 45.7 mashquul noo hayn doonaa, laakiin hadda su'aashu waxay tahay mid ka mid ah oo kaliya oo kaliya horyaalka ee maqaalka, taas oo ka baxsan habka teknoolajiyada, laakiin ma aha macnaha dhaqanka.
Waxaa la filayay, sababtoo ah da'diisa
Kani waa jawaabta ugu muhiimsan ee la xariira. Qofka 85 sano ayaa xadeynta badan oo jirka inay ajandaha u baahan fog, kulan dheer u safraan, iyo in ay ka danbeeyaan faahfaahin ah in halkii xalinta dhibaatooyinka ku lug leedahay siyaasada qeexaysa agagaarka iimaan in sanadkii la soo dhaafay ayaa 1,196 million baabtiisay; wax aan ka yarayn 17% dadka adduunka.
Maxaa ka baxaya jawaabtan koowaad waa warkii la yaabka lahaa; iyada oo aan horay loo arag, iyada oo aan ogeysiis hore, iyo kaliya oo leh maalmo 18 horay; Ka tegida booska saxda ah ee waqtiga ugu xooggan ee sanadka. Inkasta oo ay jiraan ayaa 3 ardey oo ka hor la soo dhaafay ka dhacay ku dhowaad 600 sano ka hor iyo wuxuu ku dhex jiray khilaaf aqoonsi ama non-khilaafka, antipopes iyo dhibaatooyin kale oo ku 40 sano ka dib u dhowayd inay dhammaadaan oo uu is casilay.
Cadaadiska wakhtiyada hadda jira.
Waxaan ku noolnahay wakhti halkaas oo ah cadaadis bulshadeed, anshax iyo anshax ahaanba ay si aad ah uga wada xaajoodaan boosaska Benedict uu xag-jir ahaa; Inkasta oo uu qoraalkiisii ​​ugu horreeyay ee San Buenaventura lagu soo celiyay isaga 1954 isagoo naqdin culus ka qaaday Professor Michael Schmaus; iyada oo dib u dhigis lagu bilaabay in lagu jebiyo nidaam dhaqameedka wakhtiga.
Ilmo iska soo ridid, guurka khaniisiinta, xakameynta dhalashada, euthanasia, manipulation genetic, donation organisation, si loo xuso arrimaha qaarkood oo leh kooxo adag oo cadaadinaya adduunka. Kuwani waa qeybaha ay ku adkaan doonto in ay ku heshiiyaan. Dhamaanba, haddii aan tixgelinno waxa noqon kara jagooyinka shakhsiyeed ee ka soo horjeeda jagooyinka wadajirka ah ee hab diinta.
Waxa ay noqon kartaa in shaqsi rumaysan waayana in uu yahay habka ugu wanaagsan ee looga hortago uurka ... laakiin i rumaystay in ugu wanaagsan ee labadayda carruurta ah iga, oo bal fiiri in furfuraya dhibaatada uurka da'da yar iyo hooyooyinka hal dalkaygii ... waxaa meel fog.
Mawqifkiisa waxaa lagu cadeeyay warqadda uu ka hadlayey Cardinal Theodore McCarrick, oo ah xildhibaan ka tirsan Washington DC
Waxaa jiri kara fikrado kala duwan oo ka mid ah ra'yiga Catholics ee ku saabsan dagaalka socda iyo isticmaalka ciqaabta dilka, laakiin maaha, si kastaba ha ahaatee, ee ku saabsan ilmo iska soo ridid ​​iyo euthanasia.
Marka, cadaadiska wakhtiyadani aysan noqon karin sababta ay is casilayaan; Badbaadada oo dhan, cadaadisku wuxuu noqon doonaa qofkii ku dhaco.
Su'aasha xigta waa mid aad u adag
Inkastoo toddobaadkan warbaahintu ay soo jeedin doonto su'aashan koowaad, goorta uu noqon doono mid labaad
Yaa noqon doona baadari cusub?
Maahan wax la yaab leh haddii seenyooyinka Latin Ameerika ay xiise u yeeshaan arrintan. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya hal-abuurka u taagan iimaankan Mareykanka iyo heerka dhaqameed ee Yurub ay leedahay ka dib saameynteeda taariikhiga ah iyo xiisaha iyo ilmada taas oo jiil soo saarta halka caqliga iyo horumarka ay kaga baxaan aragtida ruuxiga ah aragtida "gaarka ah". Marka laga soo tago in ay tahay tilmaan sharafeed oo loogu talagalay duruufaha soo ifbaxay ee dhinacyada diimeed, waxay sidoo kale noqon laheyd mid xiiso leh iyada oo la tixgelinayo caqabadaha siyaasadeed ee ku soo daraya dadaallada ku wajahan horumarka bulshada, taas oo ah tirooyin wanaagsan Argentina, Brazil, Honduras iyo Mexico.
Sidaas ma noqon doonto la yaab leh in musharaxiinta qaaradda this ayaa xusay ... taas oo kadis ah ku dhacaya waqti kala guur ah siyaabo badan, oo ay ku jiraan hantiwadaagga ah in uu doonayo in uu ka tago loona godka qawl soo jiidasho leh caqabadaha xaq madhay.
Dhammaanteen waxaan rajeyneynaa in qof kastoo yimaado uu tixgelin doono caqabada ay metelayaan diimeed diimeed oo leh tiro badan oo ka mid ah dadweynaha adduunka ... rajada isbedelka ee keenaya xaalado nololeed oo wanaagsan mustaqbalka ... markaad diyaarineyso ee ka baxsan.
Post Previous«Previous Google Earth 7 waxay xaddideysaa qabashada sawirada qumman ee saxda ah
Post Next Koorsada Khariidadda Caalamiga ah iyo 3 wax ka badan dalxiisyo CivileNext »